Akụkọ - Kedu ihe ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-etinye orthosis prosthesis ụkwụ
Mpụta nke aka aka aka aka bụ ihe na-enye obi ụtọ maka ndị bepụ, na-enyere ha aka dozie ọtụtụ nsogbu ndụ. Zhongkang prostheses na ngwaọrụ orthopedic na-ewebata na ọ dịghị ndị mmadụ mkpa ịnọdụ n'oche nkwagharị mgbe ha wụnyechara ụkwụ aka arụrụ arụ, na ha nwere ike ịga ije naanị ha ma ha nwetachara ọzụzụ mmezi. Ya mere, maka ndị na-apụ apụ, ọ dị ezigbo mkpa ịwụnye prosthesis kwesịrị ekwesị, na e nwekwara ọtụtụ ihe ndị chọrọ nlebara anya mgbe ị na-eyi prosthesis. Ozugbo enwere nsogbu na iyi prosthesis, anyị ga-akpọtụrụ Zhongkang prosthesis Rehabilitation Center n'oge ka ọ ghara imerụ úkwù ahụ ahụ ọzọ. Na-esote, Zhongkang prosthesis na orthosis ga-agwa gị banyere ihe ndị ọrịa kwesịrị ịṅa ntị na mgbe ị na-etinye prosthesis ụkwụ na orthosis.
2. Ndị ọrịa kwesịrị ịṅa ntị na mgbanwe nke oghere nnabata prosthesis
Ndị ọrịa kwesịrị ịṅa ntị mgbe niile na agba akpụkpọ ahụ na ọnọdụ mmebi nke akụkụ ahụ na-ebu ibu nke ligamenti ligament na oghere na-ebu ụkwụ. Ọ bụrụ na enwere ihe mgbu doro anya na akpụkpọ anụ ahụ na-adịghị mma, oghere na-enweta kwesịrị ịrụzi ozugbo, ma ọ bụghị ya, ọ ga-eweta nnukwu mmebi akpụkpọ ahụ. Enwere oghere na njedebe dị ala nke oghere mmasị n'apata ụkwụ, nke na-emekarị ka akpụkpọ ahụ dị na njedebe nke ukwu na-esi ike na oji. N'okwu a, akụkụ nke fọdụrụ na oghere oghere kwesịrị ka emetụ ya aka nke ọma iji meziwanye mmebi akpụkpọ ahụ.
3, Anya nrapagide ụkwụ nke prosthetic
A na-ejikọta akpụkpọ ahụ n'ọkpụkpụ nke ụkwụ, na ọnyá dị na mkpịsị ụkwụ dị n'ọkpụkpụ, ya mere akpụkpọ ahụ ga-adị mfe ihicha ma mee ka ọnya ahụ kpụchaa, ọnyá ahụ na-esikwa ike ịgwọta. N'akụkụ a, ekwesịrị ịṅa ntị na ngbanwe oghere, ihe ndị a na-eji na bushes dị nro, na mgbe ụfọdụ ịwa ahụ plastik dị mfe na ntinye akpụkpọ anụ dị mkpa maka mmegharị akpụkpọ ahụ ka mma.
Oge nzipu: Jun-03-2019